पेटमा ग्यास भरिने समस्या छ भने खानुहोस् यो बिरुवाको पात, १० मिनेटमै मिल्नेछ तपाईलाई राहत ! – Sapana Sanjal
June 20, 2021 201
Sapana Sanjal : पेटमा ग्यास भरिने समस्या छ भने खानुहोस् यो बिरुवाको पात, १० मिनेटमै मिल्नेछ तपाईलाई राहत ! आजको समयमा गलत खानपानको कारण धेरै मानिसहरुलाई ग्यास सम्बन्धित समस्या हुने गर्दछ । आज हामी तपाईलाई यसैसँग सम्बन्धित कुराहरुको बारेमा जानकारी दिनै छौँ । एउटा यस्तो पात चबाउनुहोस् जसले १० मिनेटमा नै तपाईको पेटमा भएको ग्यासलाई तुरुन्त राहत दिनेछ र तपाईको यो समस्या पनि टाढा हुनेछ।
याे पनि, खाने तेलको मूल्य फेरि महँगियो, कति पुग्याे त लिटर काे ? एक वर्षमा खानेतेलको मूल्य प्रतिलिटर १२० रुपियाँसम्म महँगिएको छ । यस अवधिमा सबैभन्दा बढी सूर्य मुखी तेल -सनफ्लावर- र भटमासको तेल -सोयाविन तेल- महँगिएको छ ।
कच्चा तेलका लागि विदेशकै भर पर्नुपर्ने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य उच्च दरले मूल्य वृद्धि भएकाले तेलको मूल्य बढेको बताइएको छ । नेपाल खुद्रा व्यापार सङ्घका अनुसार गत वर्ष वैशाख महिनामा सोयाबिनको तेल प्रतिलिटर १६० रहेकामा अहिले २७० र सनफ्लावर तेल १५५ बाट २७५ रुपियाँ पुगेको छ । सनफ्लावर धारा हेल्थ प्रतिलिटर १९० बाट २७० र तोरीको तेल २५० बाट ३२० रुपियाँ पुगेको छ ।
घिउ–तेल उत्पादक उद्योगीहरु तेलको मूल्य नेपालभन्दा विश्व बजारमा अझै बढी दरले बढेको दाबी गर्छन् । वनस्पति घिउ–तेल उत्पादन सङ्घका अध्यक्ष सन्दीप कुमार अग्रवालले तेलको मूल्य बढ्नुको मुख्य कारण तेल उत्पादनमा प्रयोग गरिने कच्चा पदार्थको उच्च वृद्धि नै भएको बताए ।